Waa Maxay daaraha ugu quruxda badan ee Europe | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > Waa Maxay daaraha ugu quruxda badan ee Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 20/02/2020)
Magaalooyin badan ee Europe leeyihiin madaxtooyada qurux badan (ama laba) inaan ka dhaansado ee dalxiisayaasha. Taasi waa sababta ay adag tahay in ay ku heshiiyaan ku saabsan waxa ay shan daarahooda ugu quruxda badan ee Europe yihiin. Aynu eegno at doorashada ee daaraha ugu quruxda badan ee Europe our:
1. Daaraha waaweyn oo quruxda badan ee Europe iyo France Chateau de Versailles
Versailles laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah ugu caansan Daar wayn dunida oo dhan, iyo waxa hubaal ah u qalmaa sumcadda. Waa jawharad ah 18-qarnigii Faransiis tahay, suudhka iyo hodan ku arts iyo qurux.
Waxaa la ballaariyey by taliye Faransiis caanka ah Louis XIV, dhaqaajiyey labada maxkamadda iyo dowladda si Versailles ee 1682. Chateau waxay ahayd meel dhexe ee awoodda Faransiiska ilaa Revolution ee 1789. Haddaba waxaa mid ka mid ah meelaha dalxiiska ugu caansan dunida oo dhan.
2. Windsor Castle, Boqortooyada Ingiriiska
Windsor waa Daar shaqeeya boqornimada oo ku dhex daaraha Fiican Yurub waa, qalcaddii da'da weyn oo ugu weyn ee adduunka in weli dadka deegaanka. Queen British The kharash gareeya fasaxa gaar ah iyada in Windsor.
Taariikhda Windsor Castle dhow yahay 1000 sano dheer. Qarniyo badan, waxa ay ahayd guriga ka mid ah xubno badan oo caan ah ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. qalcaddii ku jira St. George ee Chapel, goobta aaska toban ciqaab ah, iyo Guryaha State waxaa laga buuxiyey Royal khasnadihii Collection.
3. Grand Ducal Palace ee Luxembourg
The Grand Ducal Palace ee Luxembourg ee Luxembourg City waa degenaanshaha rasmiga ah ee Duke Grand ah. Waxa uu u adeegsanayaa inta badan uu hawlaha rasmiga ah, oo ay la socdaan Duchess Grand ah. madaxtooyada ayaa sidoo kale waxaa ku jira xafiisyadooda, iyo sidoo kale staterooms.
dhismaha ayaa waxaa marka hore loo isticmaalaa sida hall magaalada ka dib markii la dhisay 1572. Gudaha 1817, waxa ay noqotay joogitaanka rasmiga ah ee Guddoomiyaha. The Grand Ducal Palace muuqataa waari ee style Vlaamse Renaissance iyo in uu yahay mid ka mid ah sababta ay tahay liiska ugu jirto daarahaaga dhaadheer Beautiful in Europe our. Waxay leedahay mid ka mid ah guriyo ugu quruxda badan ee magaalada, iyo sidoo kale gudaha u qurux badan.
4. Neuschwanstein Castle, Jarmalka
Neuschwanstein qalmaa ay meel ka mid ah daaraha ugu quruxda badan ee Europe lagugu leeyahay ay goob idyllic iyo naqshadaha breathtaking. qalcaddii Tani waxay u eg-tahay yimid si toos ah oo ka mid ah cirfiid-Sheeko. Dhab ahaan, waxaa la isticmaalaa inay dhisato qalcaddii in Disney ee Hurdada Beauty.
Waa a Romanesque nooleenta madaxtooyada 19-qarnigii. taariikhyahanadu Art adduunka oo dhan waxaa ka mid ah calaamadaha of nasjonalromantiske. King Ludwig II of Bavaria dhisay Neuschwanstein sida uu u gurasho in 1837. Ka dib dhimashadii King ee 1886, waxa ay noqotay mid dadweynaha u furan.
Ulm in Fuessen Tareenadu
Munich in Fuessen Tareenadu
Stuttgart in Fuessen Tareenadu
Nuremberg in Fuessen Tareenadu
5. Daaraha waaweyn oo quruxda badan ee Europe iyo Austria – Schloss Schonbrunn
Mid ka mid ah indhaha iyo daaraha waaweyn Fiican Yurub inta badan soo booqday waa in Vienna, Awstariya, Schonbrunn sidoo kale goobta Heritage Dhaqanka Adduunka. madaxtooyada ayaa ku bilaabatay sidii buul ugaarsiga for Emperor Leopold waxaan a. Waxaa la dhisay qarnigii 17-. Schonbrunn waa mid ka mid ah shuqulladii ugu fiican ee naqshadeeyaha ugu Bernhard Fischer von Erlach.
Tan iyo markaas, Schonbrunn ayaa sidoo kale arkay isticmaalka sida barxadda Maria Theresa, ka dib markii taas oo taasu waxay noqotay barta dhexe iyo ciidan ee arrimaha gobolka. Dhisay style baroque, madaxtooyada ayaa inta badan la hadhay Xaalkeedii Horce. Its naqshadaha u gaar ah waxaa ka mid ah meelaha ugu faraxgelinta in ay booqdaan in Europe ka dhigaysa.
Haddii aad diyaar u tahay in ay qorsheeyaan aad safar ku dhawaad ​​shan daarahooda ugu quruxda badan ee Europe tahay, kuwanu waxay ahaayeen meelaha aadan ka maqnaan karin. All of dalal kuwaas oo si fudud loo gaadhi karo via tareenka, sidaas darteed jartaan tikidhka aad iyo bilaabaan qorshaynta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-palaces-europe%2F/%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / de si / es ama / iyo luuqado badan.